STEETI ENUGU KACHAA NWEE UDO NA NAIJIRIYA – Onye isi ndi uwe ojii – hoo!haa!!
N’izu ụka ole na ole gara aga, ka onye isi ndi uwe ojii na steeti Enugu bụ Alhaji Mohammed Danmallam bịara mepee ogige ụlọ ọrụ ndi uwe ojii, (Divisional Headquarters) na Nenwe dị n’okpuru ọchịchị ime obodo Anịnri na Steeti Enugu.
Ọ bụ òtù ihụnanya, mmepe obodo na-anụ ọkụ n’obi akpọrọ Nenwe Integrity Foundation (NIF) n’aha nkenke, jiri aka ha rụpụta ma nyefee ndi uwe ojii ogige ụlọ ọrụa.
Mgbe ọ na-ekwu okwu na mme mme mmepe ụlọ ọrụ ahụ, ka onye isi ndi uwe ojii na steeti Enugu bụ. CP Alhaji Mohammed Danmallam kwuputara obi añụrị ya maka ụdị agbam mbọ nke ndi otu NIF. Alh. Danmallam siri n’ọnụ onye nọchitere anya ya na mmemme ahụ bụ ACP Oliver Amechi kwue na ụdị ịgba mbọ dị otua na-agba ndi uwe ojii ume n’ọrụ.
Onye isi ndi uwe ojiia kwuru na ha ga-anwa ike ha ihụ na nchekwa tọrọ atọ batara na Nenwe. Alhaji Danmallam kwuru hoohaa, na-abịa na Naijiriya gbaa gburu gburu, n’ọbụ steeti Enugu kachaa steeti ndi ọzọ nwee udo. Ọ sịrị na ha na-agba mbọ gbara dimkpa ịhụ na ezigbo ọnọdụa alọghachighị azụ.
N’okwu nke ya onye ji ọkwa Area Commander, mpaghara ndi uwe ojii nke Agbanị, bụ ebe ụlọ ọrụ nke ogige ndi uwe ojii Nenwe danyere; bụ Hajia (ACP) Zainab Pembi toro ndi Nenwe maka mbọa di ịtụ n’anya ha gbara. Okwere nkwa ịtụnye ụtụ gbara dimkpa maka ihụ na ndi ọrụ ya wetara ezigbo nchekwa na Nenwe.
Onye isi oche na mmemme mmepe ụlọ ọrụa bụ Air Commodore Bernard Ugwueke lagoro ezum ike n’ọrụ kelere ndi uwe ojii ala anyị maka ikwere ka ha na ndi Nenwe jikọọ aka ọnụ n’ọrụ nchekwa. Air Commodore Ugwueke kwere ndi uwe ojii nkwa na ha na ndi Nenwe ga-arụkọọ ma bikọọ dika ezigbo ụmụ nne.
Onye ọka ibe n’agha ụgbọelu bụ Air Vice Marshal Chris Ndụbụisi Chukwu lagoro ezumike n’ọrụ bịakwara mmemmea. AVM Chukwu kwere ndi uwe ojii nkwa inweta ezigbo nkwado nke ndi Nenwe, ga-enyere ha ohere iji rụọ ọrụ nke ọma. AVM Chukwu bụ onye kpere ekpere ejiri malite mmemmea nọrọ na mbido kpọkue Chineke ka Ọ gaa n’ihu na inọnyere ndi Nenwe Integrity Foundation na mbọ ha na-agba maka mmepe obodo nakwa ikwalite ọdị mma ọhaneze.
Nenwe nwere ọnụmara anọ kwụrụ onwe ha (autonomous communities), nke gụnyere Uhueze, Emudo, Amọjị nakwa Agbada. Ndi igwe anọ na-achị ọnụmara anọ ndia biakwara mmemmea. N’okwu ya, onye kwuchitere ọnụ ndi igwe ndia bụ Igwe Goddy-Moore Ọjị toro ndi Nenwe Integrity Foundation maka mbọ ha na agba iji weta agam n’ihu na Nenwe. Ọ yọrọ otu ndi ọzọ dịgasị na Nenwe ka ha na-eñomi ndi otu NIF.
N’okwu nke ya, onye isi otu NIF bụ Ichie (Dọkịnta) Cyril Onyemechi Oleh, onye ọrụ welitere isi n’ụlọ ọrụ mgbasa ozi rediyo Amịrịka, kelere ndi uwe ojii ala anyị maka ịbịa mepe ụlọ ọrụa. O kelekwara ndi òtù ya bụ Nenwe Integrity Foundation maka nrube isi nakwa ịdị n’otu ha ma kelekwa onye isi chịburu yabụ otu tupu o rute ya, bụ Ichie Augustine Nkem Udeh maka ezi ndu ya nakwa atụmatụ ọma ya nke mịtara mkpụrụ ọmaa bụ iwuru ndi uwe ijii ụlọ ọrụ.
Ichie Oleh yọrọ ndi Nenwe niile ka ha were obi nwanne ji anabata nwanne nabata ndi uwe ojii ga-abịa ọrụ na Nenwe n’ihi na nkea ga-enye aka imepe ụzọ maka agam n’ihu.
Godwin Ogwo nke ụlọ ọrụ Rediyo Naijiriya Enugu haziri okwu na mmemme ahụ n’ụdị nke ndi bekee kpọrọ M.C.
Previous Post: EFCC:Ọjị Ụzọ Kalụ, ọ bụ Gọvanọ ọzọ ga-eje nga?
Next Post: ONYE ISI NDI UWE OJII ETOOLA NDI EGWU BỌLỤ CRIME BURSTERS KA HA SIRI MERIE NDI EGWU BỌLỤ ENUGU RANGERS